हालसम्म विश्वभर कुन देशमा कतिले लगाए कोरोनाविरुद्धको खोप ? - Arthasansar
हालसम्म विश्वभर कुन देशमा कतिले लगाए कोरोनाविरुद्धको खोप ?
विहीबार, ०७ साउन २०७८, १७ : ३० मा प्रकाशित
विश्वभर तीन अर्ब ७१ करोड ५८ लाख ३८ हजार ५१ डोज कोरोनाविरुद्ध खोप लगाइएको छ । कोरोनाविरुद्ध खोप लगाएका दश देशको तथ्याङ्हरु यस प्रकार रहेका छन् । चीनमा एक अर्ब ४७ करोड ९५ लाख २ हजार ८२९ डोज कोरोनाविरुद्ध खोप लगाइएको छ । भारतमा ४१ करोड ७८ लाख ५१ हजार १५१ डोज कोरोनाविरुद्ध खोप लगाइएको छ ।
जापानमा ७ करोड ३९ लाख ७० हजार ८८८ डोज कोरोनाविरुद्ध खोप लगाइएको छ । फ्रान्समा ६ करोड ५७ लाख ४१ हजार ५५ डोज कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप लगाइएको छ । टर्कीमा ६ करोड ४० लाख ५० हजार २२९ डोज कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप लगाइएको छ । इटाली ६ करोड ३१ लाख २३ हजार ४५१ डोज कोरोनाविरुद्ध खोप लगाइएको छ । – (रासस/एएफपी)
सरकार गठनबारे तालिवानमा देखियो यस्तो विवाद
विश्वका अर्बपतिको नजर पृथ्वी मात्रै होइन, अन्तरिक्षमा पनि केन्द्रित
अफगानिस्तानका विश्वविद्यालयमा अब छात्रछात्रा सँगै पढ्न नपाउने
अफगानिस्तानलाई सहयोग गर्न दातृ राष्ट्रहरुको सम्मेलन, ६० करोड डलर जुटाउने लक्ष्य
श्रीलंकामा खाद्यन्न हाहाकार, अत्यावश्यक सामाग्री किन्न पसलमा मानिसको भिड